नेपाली साहित्यको गजल क्षेत्रलाई अझ लोकप्रिय र समृद्ध बनाउने तथा यसको प्रचारप्रसार एवं समुत्थान गर्न
​नेपाली साहित्यको गजल क्षेत्रलाई अझ लोकप्रिय र समृद्ध बनाउने तथा यसको प्रचारप्रसार एवं समुत्थान गर्ने उद्देश्यले स्थापित 'गजलगृह नेपाल' पूर्णत गजलसंग सम्बन्धित संस्था हो । वि सं २०५९ सालमा काठमाण्डौको मीनभवन क्याम्पसबाट सुरु भएको 'गजलगृह नेपाल'बाट हरेक दुई महिनामा गजलको एक पूर्ण पत्रिका 'पलाँस' १९ अङ्कसम्म प्रकाशित भयो । केही वर्षको विश्रामपछि अब २० अङ्कदेखि 'पलाँस'लाई नियमित रूपमा 'अनलाइन' मा प्रकाशित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ । हामी gajalgriha.com लाई तपाईँ गजलप्रेमीहरूको आफ्नै 'वेबसाइट' बनाउने प्रयास गर्नेछौँ ।
'गजलगृह नेपाल'को स्थपनासङ्गै साठीको दसकदेखि नेपाली गजलल निकै शशक्त रूपमा अघि बढेको छ । गजल बहसको नाममा कहिलेकाहीँ अनावश्यक विदादको भुमरीमा गजललाई घुमाउने प्रयास पनि नभएको हैन । नेपाली गजल समिक्षाको अधिकाङ्स समय रदीफ, काफियाको विवादमा अल्झिरह्यो । अचेल बहर र स्वतन्त्र गजलको बहस हुने गरेको छ । गजल आफैँमा कोमल विषय भएको हुनाले यसलाई कडा नियमहरू सुहाउँदैन । यसो भन्दैमा यसको आधारभूत नियमहरू भएन भने यसको विध्यागत चिनारी पनि हुन सक्दैन । हामीलाई गजलको बहसलाई यसको संरचना भन्दा पनि यसको भाव ,प्रवृति अनि प्रस्तुतिकरणतिर लैजानु पर्छ भन्ने लाग्दछ । संरचनाको गजल गणित गर्नुभन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा यति धेरै लेखिएको गजलले किन गुणात्मक फड्को मार्न सकेन भन्ने कुरामा चिन्तन गरौँ । गजलमा लयको लगाम लगाउनुभन्दा भावको भकारी भर्नतिर लाग्नु बुद्दीमानी हुने भएकाले हामी गजलकारहरूलाई अनावश्यक विवादमा नअल्झिकन आफ्नो सिर्जनामा अघि बढ्न सल्लाह दिन्छौँ ।
हामीलाई तपाईँका आफ्ना उत्कृष्ट गजल , गजल समिक्षा, गजलगतिविधी र गजलसम्बन्धी लेखहरू पठाउनु होला । फेरि अर्को अङ्कमा भटौँला । नमस्कार ।
-सुरेश वाग्ले, सम्पादक/प्रकाशक
प्रस्तुत छ, विचारको कोरा प्रस्तुति मात्र पनि गजल होइन र सौन्दर्य मात्र पनि गजल होइन, विचार वा भावको सुन्दर अभिव्यक्ति नै गजल हो भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित विशिष्ट गजलकार ललिजन रावलसङ्ग ‘गजलगृह नेपाल ’ का लागि कवि एवम् पत्रकार रामगोपाल आशुतोषले गरेको गजलवार्ताको सम्पादित रूप :-
नेपाली साहित्यका मोती : मोतीराम भट्ट
Email : anshst@gmail.com
​गजलको एक सम्पूर्ण पत्रिका
​पलाँस अङ्क २०
​ -रामगोपाल आशुतोष
-नेपाली साहित्यका मोती : मोतीराम भट्ट
​ -आनन्द श्रेष्ठ
- केशरी खड्का (केसी)
- काशीराम बजगाई​
- गणेश घिमिरे
- तारा मैनाली आचार्य
-दिनेश राज ज्ञवाली
- दीपक निरौला
- दीपा दाहाल
- धीरु विचित्र
-प्रकाश बस्नेत गफाडी ​
- रामगोपाल आशुतोष
- सूर्य थापा​
- शेखर 'अस्तित्व'
एकै स्वरमा उठेका 'दबाइएका आवाजहरू'
​- सुरेश वाग्ले
राष्ट्रिय गजल उत्सव-२०७४
आफ्ना उत्कृष्ट गजल , गजल समिक्षा, गजल गतिविधिहरू र गजलसम्बन्धी लेखहरू
​हामीलाई पठाउनु होला ।
पागल बनायौ प्रिय...
गजल: केशव आचार्य
सङ्गीत/स्वर: शिव परियार
एक थोपा अाँसु पनि झर्न दिन्नँ भन्थेऊ,
आँसुले नै सारा जीवन धुवाएर कहाँ गयौ? ​
आफ्नो देश निर्माणमा लगाउने सपना मारी,
गरिबीको बस्तीबाट यात्रा मोडी परदेशिएँ ।
मान्छेको चाला कस्तो,जता पनि स्वार्थ हेर्ने
पूरा भयो भने स्वार्थ, सम्मानको दर्जा दिन्छौँ ।
ए जिन्दगी,तँ मलाई यति भनिदे,
हिँड्छु तेरै अनुसार, म के हुँदा राम्रो?
तिमी त महलमा पनि खुसी छैनौ रे,
​मान्छेहरू आकास ओढेर निदाउँछन्।
न विष पिलायौ न मुक्ति दिलायौ,
मलाई रुवाई दुनियाँ हँसायौ ।
खै सकिन्छ सकिन्न अव ताज बचाउन?
लागेको छु म मेरो देशको लाज बचाउन ।
विज्ञानले जिउँदै मलाई 'ल्याब'मा लगेपछि,
त्यहाँ के लेखेको छ भनी निधार फुटाएको छ।
- काशीराम बजगाई
तिमी नीलो आकाश र जूनतारा चाहन्छौ,
किसानलाई दुई टुक्रा बादल भए पुग्छ । ​
भर्खर दुखबाट उम्किएकी छिन् उनी,
​गोलो नै किन हुन परेको संसार पनि ।
खोई तिमी कसरी पो निस्कने हौ,
डुबेकाछौ खाल्टोभित्र भ्रष्टाचारको ।
लेखिँदैनन भने यदि गरिबका कुराहरू,
संबिधान नाथे आए पनि के नआए पनि के !
-प्रकाश बस्नेत गफाडी
बनेन सङ्घ, बनेन विधान यी सबको आरोप,
आफ्नो पहिचान खोज्नेमाथि लगाइरहेछ !
सत्य अहिंसा त्याग तपस्या करुणा मैत्री प्रेम क्षमा !
सद्गुणहरूको अमिय-वृष्टि-घन, बुद्धम् शरणम् गच्छामि !
म ढिलो फर्कनुको यस्तो यौटा कारण छ
आफ्नु आउनु पहिल्यै उनको घर आउँछ ।
साहस जुटाएर उठ , वीर नेपाली फेरि,
​जुध्नलाई प्रकृतिले यस्तै प्रहर बनाइ दियो ।
भमराको ताँती आयो यता भन्भनाउँदै,
उताबाट पनि आयो, माहुरीको हुल ।
थिचिएकाहरु सधैँ थिचिँदैनन कसै गरे,
चिसोचुलोभित्र आगो बल्ने बेला आउँदो र छ
लक्ष्मणरेखा मेटिसके, सीताहरू स्वतन्त्र छन्,
अग्नि परिक्षण गर्न, आज कुन राम आयो ?
मन्दिर कुर्ने भगवानले चोक धाउन थालेपछि,
पुजारीलाई 'डिस्को' जान रोक छैन आजभोलि ।
​हामीसङ्ग सम्पर्कमा रहनुहोला
©2018 Gajalgriha Nepal
​गजलगृह नेपालका लागि सुरेश वाग्लेद्वारा प्रकाशित